Junedin Sadoo Wajjiran Intrprize Bishan Oromiyaa akka hin hojeenef diiga jira Kutaa 2faa
Junedin Saadoo Oggumma bishaan basuu qaba jeedheme odeefamuufi Oromiyaaf garuu boolla tokko ilee hin qoone. Junedin lammi Oromiya tokko ilee dheebuu basee hin beekuu, yoo dhebosee malee. Junedin wajjira Bishan Oromiyaa akka galuu kan goodhe Shifraw Jaarsoo ture, garuu Junedin yeroo hunda Shifraw booda adeeme bakka isaa hojjecha waan turef waan inni murteese akka hojii irra hin olee gochaa ture, Junedin waan Kuma Damkssa murteesuu ykn Abbadula Gamada murteese duda dubben dhufee diigun amala isaatti. Junedin Sado Wajjiri Intriprazii Bishan Oromiyaa caalbasii mo’atee yeroo dhera booda akka dhisuu kan godheef waan 3 of keessa qaba. Tokkofaan, Junedin Saadoo ummurii isaatti utuu wara TPLF hayama hin gaafatin murtii tokko murteese hin beekuu, mana Fincanni deemuuf ilee Melese ykn Azeb Mesfin hayamsisee malee hin deemu. Yeroon amma kun ammo angoo irra turuu isaa yeroo dhummaf waan ta’eef caaraa Oromiyaa akkasi jara kanaf dabarsuun umurii angoo isaa dherfachuuf fedha. Yeroo sii’ana wayee ijarsaa kara fi bishan warii TPLF qoofatii dhunfachuuf waan deemanf isaan akka muxanno argatan caara kenuufin isaan gamachisuun fromfachuu isaatti;
Lammafan Shifaraw Jaarsoo utuu isiin hin hayyamsisin caalbasii addunyaa keessa galee waan barbadee hojjeta jedhe Melese fi Aezb Mesfiinti hamachuun of jalachisuu;
Sadafaan Junedin Saadoo kana dura mallaqa wajjira Bishaan Oromiyaa keessa sameen maqa Obboleeti isaan Meesha amaya Bishan boolla qotee basuu interprize mata isaa waan qabuuf hojii bishaan Oromiyaa domsaa jira. Oggesoon wajjira kana abdii kutatan akka achi baqatan gochuuf deema. Junedin Saadoo yeroo afaan Hiktuu Hadha mana Melese Azeb Mesfin ta’ee ummataa Borana wayee addaa Oromoo barsisa turan, ummataa Borana bishaan dhabee dhumma ture, kan Gujji wallin bishaan irratti wal fixa turee deemee rakko isaan hin gaafanee.
Junedin Saadoo Bishaan Gannalee jalifnee ummataa Boorana dheebuu bishaanii bara baraa irraa bafana jeedhamee gaaffii gaafatameef deebii utuu hin keenin angoo gadi dhisee. Lagga Gannalee bishaan heeduu fudhatee Gabra India deemuu lammin keenya Borana dheebuun yamuu dhumatuu Junedin Saadoo Azeb Masfin waliin Borana addaa barsisun mal jechudha? Borana caalaa Azeb moo Junedintuu addaa Borana beeka, Gujjii fi Boorana waliti naqanii yeroo Ummanii wal loolluu Junedin fi Azeb Mesfin lafa Oromiya danga malee Sheek Alemudiinf kena turan. Isaan echii kan deemanf lafa kenuuf malee Borana fi Gujji seena ykn addaa barsisuuf mitti.
Junedin Saadoo Birro Bishaan Oromiyaa keessa Meesha fi maallaqa lakkofsa hin qabnee fayyida mata isaatiif olfata ture, haqa kana namoon beekan nama 5 yamuu ta’aan nami lama Summin ajjefaman, tokko biyya ba’ee tokko biyya jira. Junedin Saadoo Oggannota Oromiyaa keessa malamatumma kan caafee Oromiyaa keessatti dirirsee isaa. Junedin dura Qabsa’oon OPDO qarshii (birrii ) ukee aduutti qoorsan waraa TPLF ti erguun ala qarshii (birri) tokkollee keessa hatachuu fi wayee mana ijarachuu ogganni OPDO hin bekani turan; Junedin akka hojii egaleen garu hojii cimman lafa wal qooduu, isaa keessa gugaatan bakka hundatti lafa fudhatan gurguruun daldalachuu egalan, Prezidaantiin gurguurta lafa Oromiyaa Alemu Simee bakka 50 fi Adanech Abebe bakka 50 fudhatan gurguraataa turan. Maqa Juneditiin lafa fudhani kan gurguraan Alemu fi Adanech Abebe turan, isaa kana yeroo bira itti deebina.
Kutaa kana xumurrudhaf biyyi Tigray fi Amhara Tuuluu urani garraa cabsani KM heeduu deeman bishaan jaalisani qoona amayaa fi jiru fi jireenya garii ummataa isaan yeroo jirachisaan Oromiyyan bishaan laga hunda keessa utuu yaa’uu jaalisiin hafee bishaan dhuggatti dhabee Oromoon dhumma jira. Maqaf garuu Prezidaantiin Oromiyaa duran Junedin Saadoo oggeesa Bishaan basuu (Geologist ) beekamaa dha jeedhama. Junedin Saadoo Korma Harree ta’uu isaa asi irratti hubana, namni beekumsa isaa fi dandeetti isaa waan baratee lammi isaa gargaaruu hin dandeenyee Prezidaantti ta’ee waan lammi isaa gargaaruu hin qabu.
Kutta birroo keessatti Junedin Saadoo Oromiyyaf Bishaan jaaliisu, ykn Bishaan basuun hafee Ogeesoon Oromoo laga qoratani jaalisii ummataaf tolchina yamuu jedhan deebiin isaa Ummanii Oromoo lafa qonnaa ummaman qabuu yoomi qootee fixee jeenan jaalisii isaa barbaachisee? Tigrayiit hinaftantti malee jeedhe nama deebisedha. Junedin beekaan addunyaa kana irra anna malee hin jiruu nama jeedhu Shifraw Jaarsoo Oggana Junedin Saadoo ture, Junedin garuu hinaafaa gadhee waan qabuuf jala deebi’ee Sawwa Faranjii jeedhe maqa baseef. Abbadula Gamada fi Kuma Damakkssa Loltuu saglii ishee irra badee, wallalla kara hin ceene jeedhe tufata, garuu gaafa ummattin Harargee Beela’uu Dabaleen OPDO loltuu warana ishee harka badee TPLFtii galtee jeedhe tufatuu Zuway tii funyan isaa qaban.
Junedin Saadoo Oggana OPDO keessa yakka heedu waan qabuuf Meles Zenawi faa guyya guyyan itti roorisa jiratuu, yoo inni hayama isaan malee bishan ilee dhugee, gurba of eegii, edoo Abate Kishoo deemee deemta jeedhun Meles yeroon Junedin nama birrati holachiisetu jira. Junedin utuu akka horma bilisan ala ba’uu danda’ee lamffaa nama Ethiopiatti hin deebine keessa isaa 1ffaa dha. Junedin Giftii isaa Azeb Mesfin gooftaa isaa Meles Zenawi malee raachaa bishaan keessa bateen wal qixaa, yoo isaan waliin wal-dhabee ilee kan isaa ararsuu Abba Mana isaa Alamuidiin dha, dhiifama yeroo tokko Jaalalii Junedin fi Alamudiin Jaalalaa abbamana fi Hadhamana caalaa ho’aa waan turef akkas jenee. Jaalalii Junedin fi Alamudiin duba maltuu jira? amoo yeroo birra itti deebina. Junedin kan jirachuu danda’eef angoo irra tureef Daldaallaa Alemu Simee qaba inni Azeb fi Alamudiinti rakko isaa himaaf, Alemun caaraa kanati dhimma ba’ee sodaa tokko malee lafa Oromiyya gurguree qixeese, utuu kun ta’uu batee hin jiratuu. Sababa isaa dabbalee OPDO Junedin nama jeedhamuu hin jalatuu.
Namni kun kayyoo hin qabu, of hin amanuu nama hin amanuu, Oromumma gatee amanta fi ijoolee lagan of ijaare. OPDOn cimmin ishee tokko gandumaa fi amntan keessatti hin dagagnee ture. Gandumaa fi Amntan gartuu ijarachuu kan OPDO keessatti egalee Junedin Saadootti, kana baliina itti deebina. Gummaa Wajjira Interprizii Bishaan Oromiyya Junedin Saadoo fayya isaa wajjiricha balbalatii gubuudhan gumma bana jeedhani saboontoon Oromoo caaffee Oromiyyaa.